Ungasusa kanjani u-dandruff?
Inkinga ehlotshaniswa nokubukeka kwe-dandruff sekuye kwaphela ukucatshangwa ukuthi iyodwa kuphela izimonyo. Ngokuthuthukiswa okujwayelekile kwamangqamuzana ekhanda, izikhwama ze-scfoliating zihlala zingabonakali. Kodwa ngokuphazamiseka kwe-hormonal, ukuwohloka kwezempilo, ukushaywa indiva kuba yingozi yangempela. Ososayensi baye basungula imbangela enkulu yale fungus yesifo - conditionally-pathogenic. Le fungus ihlala njalo ekhanda, kodwa ngaphansi kwamathonya kwezinye izinto, umsebenzi wayo uqinisiwe. Ngenxa yalokho, amangqamuzana awahambanga nomjikelezo wemvelo wezokuthuthukiswa, ogcina inyanga eyodwa, futhi uphonsa ingakapheli isonto, ebumba phezu kwekhanda ungqimba lwezilinganiso eziphuziwe eziphuzi. Uma lokhu kubangela ukutshaya noma ukubomvu kwesikhumba, lezi zibonakaliso ze-seborrhea we-scalp. Ukwelashwa kwe-head seborrhea akukwazi ukuhlehliswa, ngoba kungaholela ekwehleni kwezinwele noma ngisho nokuhlunga.
Ngaphambi kokukhipha udoti udinga ukusungula imbangela yalokho okwenzekayo. Uma inkinga ingaphakathi, khona-ke akukho ama shampoos avela ku-dandruff azokusiza, futhi umphumela wokusebenzisa amakhambi omuntu wezinhlanzi uzohlala isikhathi esifushane. Kanti futhi, ukukhwabanisa kungaba ukubonakaliswa kwezifo ezibi kakhulu, zombili izicathulo nezitho zangaphakathi.
Ukwelashwa kwe-seborrhea we-scalp
I-Seborrhea yisifo esibangelwa ukuguqulwa emfihlekweni ye-sebace. Ukuhlukanisa phakathi kwe- seborrhea enamafutha kanye eyomile ekhanda. Uma lesi sifo senzeke, okokuqala kudingekile ukuthi ushintshe ukudla kwakho, ngaphandle kwamafutha, okuthosiwe, okubabayo, okusawoti, okuphuzile futhi okuthakazelisayo. Kunconywa ukuba udle inqwaba yemifino, izithelo ezinomuthi ophansi we-saccharides, nokudla okunamavithamini A, B, C no-EE. Futhi kufaka phakathi ekudleni imikhiqizo yobisi omuncu, ukudla okuqukethe i-fiber.
Uma kunconywa i-seborrhea ye-oily head, ukwelashwa nge-sponge, engathengwa ekhemisi. Inkambo yokwelashwa inezinqubo ezingu-8, ezigcinwe njalo ezinsukwini ezingu-5. Ukuze uthole ingxube udinga i-powder yamanzi, i-hydrogen peroxide engamaphesenti amathathu noma isisombululo se-boric acid (isigamu seglasi yamanzi - 0.5 tsp acid powder). 1 isipuni se-bodypages kancane kancane uthele ngaphezulu nge-peroxide noma isisombululo se-boric acid. Sebenzisa izitsha ezifakiwe kuphela. Hlanganisa ingxube, uvuselele ngobumnene, emanzini okugeza. Sishisa ingxube eshisayo esihlalweni sobukhosi (sebenzisa amagilavu ​​we-rubber) futhi, ugobe ithawula lekotini, ulinde isigamu sehora. Hlanza nge-shampoo encane yezinwele ezinamafutha.
Kunconywa, uma ku-seborrhea ye-scalp, ukwelashwa kufanele kukhethe isazi sezintambo esiyingcweti, esizocacisa izimbangela kanye nohlobo lwesifo. Phela, lezi zimpawu zingaba ne-psoriasis, i-dermatoses nezinye izifo zesikhumba, okungukuthi udokotela kuphela ongayibona. Njengoba kutholakala kahle ukuxilongwa nokusetshenziswa okuyinkimbinkimbi, ukwelashwa kwe-seborrhea yekhanda kuthatha izinyanga ezi-1 kuya kwezingu-3.
Ukwelashwa kwezinto ezihamba phambili
Uma ukubonakaliswa kwe-dandruff kungabangeli ukukhathazeka okuthile nokwesaba, futhi kungabangelwa izinkinga zangaphakathi, mhlawumbe uzokwazi ukuwuqeda ngokuthatha imoto emnandi emasimini ekhemisi.
Kukhona futhi izixazululo eziningi zabantu abahamba ngezinyawo. Elula kunawo wonke ama-masks akhiqizwa ngemikhiqizo yobisi. Kunconywa ukuba kusetshenziswe imizuzu engu-40 ngaphambi kokugeza izinwele zonke.
Ikhambi elihle eliqinisekisiwe le-folk - i-mask nge-anyanisi noma i-anyanisi ijusi, kanye ne-decoction ye-toion husk.
Amaski asebenzisa amafutha ezithokozi angasizi nje ekulwa nomkhuhlane, kodwa futhi ayenze izinwele zibe namandla futhi zihle kakhulu.
Ikhambi elihle lokudonswa yi-decoction of nettletle. Brew 2 wezipuni amaqabunga enambuzane (omile noma ahlanzekile) futhi afune amahora angu-24. Sebenzisa izikhathi 2 ngesonto ngaphambi kokulala ubusuku bonke, izinyanga ezimbili. Izinwele ezomile, i-mask ye-yolk yeqanda namafutha we-castor kufanelekile. Yigcine imizuzu engu-15, bese ugeza ngamanzi ngejamu lemon.
Ukukhetha ikhambi lezinhlanzi, cabanga ngezici zomuntu ngamunye we-scalp. Uma ukusabela kwe-allergenic kwenzeka noma uma kungekho izinguquko ezinhle, indlela yokwelapha kufanele ishintshwe. Ukuqeda ukukhwabanisa ngendlela ephelele ngeke kubangele ubunzima obukhethekile, kodwa impilo enhle nokubukeka okuhle kuzokunika okuningi kumnandi.
Ukulahlekelwa izinwele - ukwelashwa
Izinwele zikhula ngokushesha kangakanani?
Indlela yokubhala izinwele ezinde?
Yimaphi amafutha afanele izinwele?
Esvitsin ngezinwele - lonke iqiniso mayelana nomuthi
Izinwele zezinwele nge-sinamoni
Ubhontshisi obuthweswe iziqu
Ukuqokomisa ama-mazhimesh - izinzuzo nezindleko
Izinhloko zekhanda ekhanda
Umbala wezinwele nge-henna - kanjani ukufeza umthunzi oyifunayo?
Izitayela ze-Festive ngezandla zabo
Izinwele ze-Toning ekhaya
Izinwele esihlakalweni sabesifazane - izizathu
Izithombe zesithombe zihlumela emgwaqweni
I-Antonín Dvořák Museum
U-Beyonce noJay Zee bajabule abalandeli abanomdwebo wezithombe ezimibalabala kwelinye lamabhishi eJamaica
Isilinganiso se-ESR ezinganeni
Umhlaba wezilwane waseWestlife Park
I-Keflavik - Isikhumulo sezindiza
UJennifer Aniston, kanye nomyeni wakhe nabangane bakhe, bagubha usuku lwakhe lokuzalwa ezindaweni ezishisayo
I-Psychological Quantum - yikuphi ukuqonda komuntu?
I-Lula-kebab evela ku-ingulube - iresiphi
Amakamelo emigwaqo emincane
Indlela yokwelapha umkhuhlane emntwaneni?
Kungani ikhabe iyasiza?
Amacici egolide anedayimane
Iminyango yangaphakathi yesimanje
I-shark tattoo - inani
Izitsha zemifino zokwehla kwesisindo